६ वर्षसम्म सँगै बसेकी अंकिता रुदै सुशान्तको परिवार भेट्न पुगिन् ..!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/६ वर्षसम्म सँगै बसेकी अंकिता रुदै सुशान्तको परिवार भेट्न पुगिन् ..!!
सुशान्तको आ त्मह त्या प्रकरण अहिलेसम्म अनु सन्धानमा छ। प्रहरीले यस सन्दर्भमा सुशान्तका घनिष्ठ मित्रहरू रिहा चक्रवर्ती र महेश शेट्टीलाई सोधपुछ गर्ने छ।यस्तै मुम्बई प्रहरीले परिवारका सदस्य र आफन्तसँग अनुसन्धानका लागि सोधपुछ गरिरहेको छ। आ त्मह त्या हो वा अरु केही ष ड्यन्त्र छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सुशान्तकी बहिनीको पनि वयान लिएको छ।
बहिनीका अनुसार सुशान्त पछिल्लो ६ महिनादेखि डिप्रे शनमा थिए। पछिल्लो एक सातायता उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको थियो। उनी सुशान्तको घर आएर २ दिन बसेर गएकी थिइन्।हालै औषधि लिन पनि छोडेका थिए। उनको भनाईअनुसार डिप्रे शनकै कारण सुशान्तले आ त्मह त्या गरेको देखिन्छ।